Jan Tříska - VipCasting.cz wuu dhintay
Jan Tříska ayaa dhintay
Honza, Jan Tříska, Charles Bridge, Prague, rip, dhimasho, Chickpeas, wuu dhintay, USA, wuu dhintay
Ka dib markii Sabtidii ka dhacdey Charles Bridge ee magaalada Prague, actor Jan Tříska wuxuu ku dhintay isbitaalka markii uu da'diisu ahayd sanado aan 81 aheyn. Macluumaadka waxaa xaqiijiyay ilo dhow oo uu jilibku dhawaan la shaqeynayey.
Chip ayaa dhacay sabtidii ka dib 16. saacadood ka soo wareegtey Charles Bridge ilaa webiga Vltava, halkaas oo ay labadoodu ka soo qaateen markabka doonyaha. Wuxuu dib u furay isaga oo samatabbixiyeyaashu u wareejiyeen Waaxda Daaweynta Dabaysha (ARO) ee Isbitaalka Milatariga ee Prague ee Střešovice.
Jan Tříska(4 November 1936 Prague - 25 September 2017 Prague) wuxuu ahaa actarka Czech-American. Xaaskiisa Karla Chadimova.
In sano ee 1955-1959 bartay simaha ee Academy of Farshaxanka ee Prague, ka dibna 1959 uu noqday xubin ugu da'da yaraa ee Masraxa Qaranka ee Prague. Heerka Masraxa Qaranka, si kastaba ha ahaatee, wuxuu u muuqday xilligii waxbarashadiisa 1956-1957 xilli, markii uu u beddelay kaaliyaha koowaad ee ČapekCudurrada cadaanka ahoo uu hogaaminayey Franz Salzer iyo sidoo kale qoraallo kale oo labaadMaryes(oo uu maamulo Zdeněk Štěpánek) iyo sida BallanqaadkaSaint John(oo uu maamulo Jaromír Pleskot). In 1966 wuxuu u tagay Krejč Theater ka dib albaabka, ka dib markii uu burburay waxaa lagu martiqaaday 1973na Kladno iyo 1974-1977 wuxuu ku ciyaaray Tiyaatarka Degmada ee Prague.Wuxuu ku ciyaaray masraxyo iyo filimyo badan,Raduz iyo Mahulena(1970)30 xaaladood oo ah Zeman Major. Diiwaanka StB, Tris wuxuu ku qoran yahay wakiil, magaca "Toman", lambarka diiwaangelinta 5 680.Isaga qudhiisu wuxuu sheegay inuusan waligiis u dhaqmin sida wakiil.
1977, wuxuu go'aansaday inuu u guuro Kanada, ka dibna Maraykanka. Dalbashada jilaa ma aysan helin ilaa waqti dheer. Tusaale ahaan, wuxuu ahaa sawir qaade filimkaDadka ka soo horjeeda Larry Flynt, wuxuu ka muuqday filimkaHighlander, Osterman's Weekend, Ronin, 2010: Xarunta Fudud ee Labaadiyo kuwa kale. Ka dib Kacaanka Revolution, wuxuu ku soo laabtay Czechoslovakia wakhti dheer si uu u sii wato xirfadkiisa.
Doorka uu u leeyahay macallinka Igor Hnízda ee Jan Svěrkk ayaa si fiican loo yaqaanDugsiga Guud(1991, Oscar magacaabay), sidoo kale wuxuu ku ciyaaraa filimada, tusaale ahaanŽelary(2003, mar labaad magacaabida Oscar),Waa hoos u dhac(2004). Ciyaarta ciyaartaKing learxafladda Shakespeare Summer, 2002 waxaa lagu abaalmariyay abaalmarinta Alfred Radok ee kaalinta hoggaamineed. Mid ka mid ah doorarkiisa kale ee filimka, wuxuu ku jiray filimka Mácha ee gabayadaMaylaga bilaabo 2008 iyoShakigalaga bilaabo 2009. 24. ee Filimka Caalamiga ah ee Filimada - Febiofest on 23. March 2017 waxay heshay abaalmarinta Kristián ee faa'iidada filimka adduunka.
Mararka qaar xiliga xagaaga wuxuu booqday jamhuuriyadda Czech, laakiin wuxuu ku noolaa Los Angeles xaaskiisa, actorka Czech Karel Chadim, oo uu lahaa laba gabdhood. Waxa uu ahaa khudradda.23. Sebtembar 2017 dhaawac halis ah ayuu ka soo gaaray dayrtii Charles Bridge.Cawaaqibka shilalka ee Isbitaalka 25. Sebtember 2017 ayaa dhintay.
Masraxa masraxa, xulashada
1956-1957 Karel Čapek:Cudurka Cadaanka ah, kaaliyaha koowaad, Tiyaatarka Qaranka, oo uu hogaamiyo Jaromír Pleskot
1956-1957Maryas, nin labaad, Tiyaatarka Qaranka, agaasime Zdeněk Štěpánek
Saint Jane, oo uu maamulo Jaromír Pleskot
1959 František Hrubín:Agoosto Axad, Jirka, Masraxa Tyl, oo ay maamusho Otomar Krejča
1959 Moliere:Don Juan, Pořízek, Masraxa Til, oo uu hogaamiyo Jaromír Pleskot
1961 William Shakespeare:King lear, Edmund, Theatre Smetana, oo ay maamusho Franz Salzer
1963 William Shakespeare:Romeo iyo Juliet, Romeo, Masraxa Qaranka, oo ay maamusho Otomar Krejča
1964 Josef Topol:Dhamaadka daaqada, Rafael, Theatre Til, oo uu ku maamulo Otomar Krejča
1965 IS Turgenev:Dayaxa ee tuulada, Alexej N. Beljajev, Masraxa Tyl, oo ay maamusho Rudolf Hrušínský
1965 Josef Topol:Miisaanka xayawaanka, Véna, Masraxa albaabka, oo ay maamusho Otomar Krejča
1966 Alfred de Musset - Lorenzaccio (1834) - Magaca. doorka, Masraxa albaabbada, oo ay maamusho Otomar Krejča.
1966 AP Sheekow:Saddex gabdhood, Tuzenbach, Masraxa albaabbada, oo ay maamusho Otomar Krejča
1971 Sofokles:Oidipus, cinwaanka. doorka, Masraxa albaabbada, oo ay maamusho Otomar Krejča
1973 JW Goethe:Faust, titul.role (jh), Jaroslav Průcha Theatre, oo uu hogaamiyo Václav Špidla
Carruurta Herakles, Iolaus, Tiyaatarka Qaranka Maraykanka
shimbir badeed The, Tiyaatarka Qaranka ee Mareykanka
Cuntada Idiot, Tiyaatarka Qaranka ee Mareykanka
Master iyo Margaret, Tiyaatarka Dadweynaha ee New York
Zastrozzi, Tiyaatarka Dadweynaha ee New York
Xaad daanyeer The, La Jolla Playhouse
Hubka iyo ninka, La Jolla Playhouse
Farriinta ugu danbaysa ee Cosmonaut, La Jolla Playhouse
Cherry: Duufaan, Tiyaatarka Gulthrie
Largo Desolato, Yale Repertoire Theater, Critics Circle Awards ee Abaalmarinta Male ee ku jira Connecticut, USA
Ciidanka Saddexaad, Tiyaatarka Long Long
Arsenic iyo Old shalash, Tiyaatarka Long Whartf
2002, 2003 William Shakespeare:King lear, cinwaanka. doorarka, Shakespeare Summer Shakespeare, Agaasimaha Martin Huba iyo Tetaniga Smetana oo uu hogaamiyo František Salzer
2012 Yasmina Reza:Kumšt, Mark, Jan Hrušínský Theatre